Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Akwụkwọ akụkọ Ashley Young Child Plus nke na-emeghị ihe ọ bụla
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kacha mara aha na aha njirimara; "Na-eto eto".
Ụdị Ashley Young Biography na Akụkọ nwata anyị na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge.
Nyocha nke ndị ọkachamara n'ịgba ọsọ na United Legend gụnyere ya Early Life Story tupu ama ama, mmekọrịta mmekọrịta na ndụ ezinụlọ. Dika ozo, ihe omuma nke onwe ya na ihe omuma ndi ozo amaghi banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya dị iche iche mana ole na ole na-atụle akụkọ ndụ Ashley Young nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Ashley Young Childhood Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
A mụrụ Ashley Simon Young na 9th nke July 1985 na Stevenage, United Kingdom. Amuru ya na Cancer nye ndi nne na nna Jamaica, Mr na Mrs Luther Young.
Ndị na-eto eto gara Schoollọ Akwụkwọ John Henry Newman na Stevenage. Nke a bụ ebe ọ malitere ịkụ bọl. N'ezie, Young gbara bọọlụ bọọlụ n'akụkụ Formula One onye na-anya Lewis Hamilton, onye nọ n'afọ ahụ.
Ọ dịtụghị anya na bọlbụ site na nwata. A mụrụ ya ma zụlite na Hertfordshire wee bido ọrụ ntorobịa ya mgbe ọ dị afọ 10 na Watford.
Ọ ghọrọ ndị otu egwuregwu mbụ na 2004-05 na ọ bụ otu n'ime ndị egwuregwu bọọlụ Watford na oge mmeri ha 2005-06 na-akwado ha.
Onye na-eto eto gara n'ihu na-egwu nke ọma Watford na Premier League, na Jenụwarị 2007 ọ zigara Aston Villa.
Ọ guzobere onwe ya na ndị otu egwuregwu mbụ na Villa Park wee merie PFA Young Player of the Year award na 2009.
Na 23 June 2011, Young bịanyere aka na Manchester United maka ego a na-akọwaghị. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ọnye na-bụ Nicky Pike? Nwunye Ashley Young:
Ndụ mmekọrịta Ashley Young gbadoro ụkwụ na otu nwanyị. Ọ dịghị onye ọzọ karịa obi nwata ya, Nicky Pike.
Ha abụọ malitere ịkpa mgbe ha ka nọ n'ụlọ akwụkwọ. Nke a bụ nnụnụ ịhụnanya abụọ - Ashley Young na Nicky Pike.
Ashley Young na-agbalị ugboro ugboro iji mee ka Manchester United nwee oge ọ ga-eji kwado oge ya site n'inwe obi ụtọ Nicky Pike. Otú ọ dị, ọdachi ahụ mere.
Onye England winger hapụrụ ndị enyi na ezinụlọ ya mgbe ọ na-akpọ oku agbamakwụkwọ ,200,000 48 nke na-acha anụnụ anụnụ naanị 2011 awa tupu nnukwu ụbọchị na XNUMX.
Ihe kpatara ịkpọ agbamakwụkwọ ya ka amabeghị. Agbanyeghị, mkpebi ikpeazụ ọ mere mere ka ezinụlọ abụọ ahụ nwee ụkwụ oyi.
Ashley mejupụtara afọ anọ ka e mesịrị. Ọ doziri agbamakwụkwọ ọzọ ma gaa Nicky Pike.
Di na nwunye ahụ nwere ụmụ abụọ, nwa nwoke dị afọ itoolu Tyler na obere nwa nwanyị bụ Ellearna. Nke a bụ ezigbo ezinụlọ Ashley Young.
Ashley Young Biography Eziokwu - Esemokwu:
Na ngwụcha 2017, Young and Alli na-etinye aka na nkeji 30th n'oge mmeri Manchester United meriri Tottenham mgbe Young kwuru na Spurs na-azụ Serge Aurier jidere ya na ihu.
Alli wee soro na-aga n'ihu na-eto eto tupu ndị na-egwu si n'akụkụ abụọ abata n'oge nkeji ọkara.
Mpempe akwụkwọ n'etiti Young na Alli gara n'ihu mgbe onye nchịkwa Jon Moss gbalịrị imebi ọnọdụ ahụ.
Ndị na-ekiri ihe nkiri ghọtara nke ahụ Alli gwara 32 afọ ọ kwesịrị 'jiri ezumike zim ezumike nká'. Nwa okorobịa, onye meriri Premier League, FA Cup, Njikọ Njikọ na Europa Njikọ na United, kwenyere na ọ zara site na ndụmọdụ Alli ọ bụghị ịgwa ya okwu n'emeghị nkwanye ùgwù ruo mgbe o meriri ihe.
Onye na-eto eto mechara kwụsị nsogbu ahụ site n'ịgwa Alli: "Mee ka m mara mgbe ị meriri Prem." A na-aghọtakwa okwu ndị ahụ na-aga n'ihu n'ọgbọ ahụ mgbe egwuregwu ahụ kwadoro na-eto eto.
Na-eto eto na-akwa emo Alliegbugbere ọnụ mgbe egwuregwu na otu tweet nke gụrụ: “Nnukwu Otu Mmụọ. Nsonaazụ Dị Mma. Okwu dị ọnụ ala. ”
Ndụ ezinụlọ nke Ashley:
Akụkụ a nke akụkọ ndụ anyị na-ekpughere eziokwu ndị ọzọ gbasara onye egwuregwu bọọlụ Bekee na-agbanwe agbanwe. Na-enweghị oge ọzọ, ka anyị malite.
Banyere Ashley Young Father:
Aha ya bụ Luther, o si Jamaika. Luther Young dị ka a na-akpọkarị ya bụ nnukwu onye na-akwado Tottenham Hotspur. Luther egosila ezinaụlọ ya nke ukwuu n'akụkụ ọ bụla egwuregwu mara mma ga-enye.
Banyere Ashley Young Mother:
Sharon bụ nwaanyị mụrụ ya. Ọ bụ nwanyị na-adịghị eme ihe ọzọ karịa iziga igbe ọkụkọ jerk na-esi nri n'ụlọ nke Young kacha amasị ya na ọgwụgwọ Jamaica na-esi ísì ụtọ. N'okwu Young…
“Ihe oriri ahụ na-echetara m nwata. Obi dị m ụtọ ịnwe ihe nketa nna m na papa m si Jamaica. Mgbe anyị na-etolite, nke ahụ bụ nri m na-eri. Ọ na-echetara m akụkọ ihe mere eme m ”.
Sharon Young na di ya ka na-ebi n'ebe ndịda mgbe Young n'onwe ya nọ n'ebe ugwu na Manchester.
Banyere Ashley Young Brother:
United Legend nwere otu nwanne tọrọ ya. Nke ahụ bụ nwanne ya nwoke (Martin Young) na nwoke a bụ nnukwu onye na-akwado Arsenal. Dike ya na onye nlereanya ya na na n'èzí bụ Ian Wright.
ọzọ, Ashley nwekwara ụmụnne nwoke abụọ na-egwu egwuregwu bọọlụ, bụ Lewis Young, onye mere ihe izizi maka Watford na 2008, yana Kyle Young, onye na - azụ ọzụzụ na Eprel 2009 na Arsenal Academy.
Ee, ha nwere ike ịbụ nwata n'aha, ma ahụmahụ nke ezinụlọ a na football bụ ihe a na-enweghị atụ. Martin Young bụ afọ 6 karịa Ashley. Ashley bụ 4 afọ karịa Lewis na Lewis bụ 7 afọ karịa Kyle.
Lewis rụrụ ọrụ ogologo oge na-amasị Burton, Northampton na ugbu a Crawley. Ma Martin ma Kyle ahụla ka nrọ ha na-akpata n'ihi ihe dịgasị iche iche.
Quartet na-akpọtụrụ kwa ụbọchị site na mkparịta ụka otu WhatsApp, ya na Lewis na Ashley na-agbasosi ike n'ihi ịdị nso ha na afọ na ọnọdụ ha na-adịbeghị anya site na winger ruo azụ.
N'ezie, site n'ịkpọ England na mmeri Premier League, iji wepụ ya na egwuregwu ndị dị ala, na-enwe obi mgbawa nke oke mmerụ ahụ na-emebi ọrụ tupu ya amalite - Ndị na-eto eto ahụla ya niile.
Leydị Ashley Young:
Ashley bụ ọrịa cancer ma nwee àgwà ndị na-esonụ na àgwà zodiac ya;
Ike Ashley Young: Ezi uche, inwe obi ike, iguzosi ike n'ihe, inwe mmetụta uche, inwe ọmịiko ma na-eme ka obi sie gị ike.
Adịghị ike Ashley Young: Mgbaghara, enweghị nchekwube, enyo enyo, nchebe na enweghị nchebe.
Ihe Ashley Young nwere mmasị: Art, ihe omume ntụrụndụ nke ebe obibi, izu ike nso ma ọ bụ na mmiri, na-enyere ndị a hụrụ n'anya, ezigbo nri na ndị enyi
Ihe Ashley Young anaghị achọ: Ndị mba ọzọ, nkatọ ọ bụla nke mama, na-ekpughe ndụ nke onwe gị.
Ashley Young Biography - ebubo ebubo:
Akpọla Ashley Young ka ọkaibe nke mmiri mmiri na asọmpi Premier. Ndị nta akụkọ boro ya ebubo na ọ na-agba mmiri ọtụtụ ugboro.
Ọzọkwa, Young ekwupụtala otu oge nye ndị njikwa mbụ Sir Alex Ferguson na David Moyes banyere mmiri mmiri iji nweta uru na-ezighị ezi.
Daalụ maka ịgụ akụkọ nwata anyị Ashley gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ. Na LifeBogger, anyị na-agba mbọ maka izi ezi na izi ezi n'inye gị ihe Akụkọ ndụ ndị egwu bọọlụ Bekee. Ọ bụrụ na ịhụ ihe na -adịghị mma n'isiokwu a, biko tinye nkọwa gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!